Semalt: Okuqukethwe kwe-SEO-Friendly Okuzokwenza i-Google Panda Ayithande!
Uma usanda kulungiselelwa isiteji futhi ufuna ukushicilela okuthile, phawula ukuthi okuqukethwe okuphezulu nephutha kungakhuphula ukwethembeka kwakho kwi-intanethi. Uzokhiqiza eziningi zethrafikhi kusukela kokubili kokuxhumana kwezenhlalo ne-Google uma okuqukethwe kwakho kufinyelele emakethe.
UJack Miller, i- Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, ukholelwa ukuthi leyo mfanelo yokuqukethwe yindawo ebaluleke kakhulu ukugxila uma ufuna ukugwema izijeziso ze-Google Panda nokumemeza. Ngenxa yokuthi i-Panda iyinxenye ye-algorithm yokukala isayithi ye-Google ngo-2017.
Kuphoqelekile ukugxila kubasebenzisi uma kuziwa kokuqukethwe nokumaketha kwezokuxhumana - магазин xl мебель. Okubalulekile ukuthi abantu bazama ukushicilela nokukhuthaza okuqukethwe okuphansi kwekhwalithi, kodwa kufanele ugxile ekushicileleni okuphezulu okushiwo yizihloko eziyingqayizivele. Kule ndaba, bonke abakwa-webmasters nababhlogi bezwe kumele baqonde izici ezithile eziyisisekelo mayelana nokwanelisa izidingo zokuqukethwe kwewebhu, ngoba umnyango wokuphumelela ungavuleka kuphela uma ungahambisani nekhwalithi yokuqukethwe.
Ukubhala okuqukethwe kwe-SEO-friendly kuye kwaba isidingo kulezi zinsuku, futhi umbhalo wamakhasi akho wewebhu kufanele ulungiselelwe ngokusebenzisa amagama angukhiye kanye nemishwana efanele.
Kunombhalo Ongawudinga Ukubhala?
Kufanele ubeke imibhalo efanele kumakhasi okwesikhundla esingcono imiphumela yokusesha . Kuphephile ukusho ukuthi ayikho inani elihle lemibhalo ngayinye, futhi lihlukile ngesihloko kuya esihlokweni. Ngisho ukuthinta uhlobo lokuqukethwe obhalayo, nesihloko zizokwethula izothola ukuthi zingaki amagama okufanele abhalwe phansi. Ezinye zezihloko zingafakwa emagama angama-300-400, kuyilapho abanye befuna ukuthi ubhale kuze kufike kumazwi ka-2000-3000.I-SERP izocacisa nokuthi kuningi umbhalo odingekayo isigaba esingcono kwimiphumela yokusesha injini. Kunokuba ugxile ngobuningi bombhalo omkhulu wokuqukethwe (MC), ukugxila kwakho kumele kube kwikhwalithi yokuqukethwe kanye nohlobo lwezinto ezilalelwayo izilaleli zakho ezithandayo kakhulu. Kumele kubhalwe amagama amangaki. Amanye amakhasi athola isikhundla esingcono ngisho namazwi angu-50, kuyilapho abanye kufanele bajabulise i-Google ngamagama angu-5000.
UJohn Mueller ovela ku-Google uthi akukho okubalwa okungenani kwegama kanye nokugxila kubalobi bokuqukethwe kufanele kube ngekhwalithi kunokuningi.
Zingaki Amagama Angakwazi Ukukwenza?
Kubuye kuxhomeke ezintweni ezimbalwa, isibonelo, kufanele uqaphele imigomo yeNhloko yekhasi lakho. Qinisekisa ukuthi akukho ikhophi futhi unamathisele, futhi okuqukethwe kufike kumazinga we-Google. Kulesi simo, kuzoba lula kuwe ukukhulisa okuqukethwe.
Gwema ukukhishwa kwegama elingukhiye:
Ukugxila ngegama elingukhiye kuhambisane ne-Google nezinye iziqondiso zenjini yokusesha! Esikhundleni sokugxilisa amagama angukhiye amaningi nemishwana, kufanele ukhokhele kakhulu ukunikeza okuqukethwe okunembile nokukhwalithi. Ukugxila igama elingukhiye kuyinkqubo yokuphinda igama elingukhiye elifanayo noma ibinzana ngokuphindaphindiwe kokuqukethwe kwakho. Kubhekwa njengendlela ye-black hat ye-SEO futhi iphikisana nemithetho nemigomo ye-Google.
Isibonakaliso sokuqala sokuthi "isipiliyoni somsebenzisi" okufanele usebenze nayo yi-content high quality kanye nokusetshenziswa okuncane kwamagama angukhiye. Kufanele uxoxise okuqukethwe kwakho kwi-niche yesayithi lakho, uqiniseke ukuthi ikhwalithi ayitholakali nganoma yiliphi izindleko njengoba yilokho okungakusiza usinde kwimiphumela ye-Google.